Midowga Yurub oo ka hadlaya Heshiiska Qaxootiga ee Turkiga kala dhaxeeyay Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka DenmarkMidowga Yurub oo ka hadlaya Heshiiska Qaxootiga ee Turkiga kala dhaxeeyay
Midowga Yurub oo ka hadlaya Heshiiska Qaxootiga ee Turkiga kala dhaxeeyay
March 23, 2021 Wararka Denmark, Wararka Finland, Wararka Maanta Somaliska 0
Photo: Marko Säävälä / TT
Wasiirada Arimaha Dibada ee Midowga Yurub waxay ka hadlayaan mowduuca heshiiska socdaalka ee u dhaxeeya Midowga Yurub iyo Turkiga ee dhacay sanadkii 2016.
Heshiiska wuxuu dhigayaa in Midowga Yurub uu Turkiga siinayo kaalmo lacageed si ay u maareeyaan qaxootiga iyagoo ku badalanaya in la joojiyo qulqulka muhaajiriinta iyo qaxootiga ee soo galaya Midowga Yurub.
Heshiiska waxaa la kulmay cambaareyn kulul oo uga timid ururada xuquuqda aadanaha, halka wadamo badan oo ka tirsan Midowga Yurub ay u arkaan inay “aad ugu baahan tahay” wax ka qabashada arrimaha socdaalka. Haddaba su’aasha taagan ayaa waxay tahay heshiiska miyaa la cusbooneysiin karaa iyo muddo intee le’eg.
Wasiirada arimaha dibada ee Midowga Yurub ayaa ku kulmi doona magaalada Brussels, halka madaxda dowladaha iyo dowladaha Midowga Yurub ay qaban doonaan shir dijitaal ah Khamiista iyo Jimcaha. Miiska kulanka iyo shir-madaxeedka, waxaa lagu muujiyey arrimo dhowr ah oo muhiim ah, sida xiriirka labada dal ee deriska ah, Ruushka iyo Turkiga, iyo cunaqabateyn la saaray dhowr waddan oo kale.
Waxaa la filayaa in xiriirka kala dhexeeya Turkiga uu noqon doono mid laga wada hadlo muddo dheer sababo la xiriira khilaafaad dhowr ah oo ka dhex muuqday Turkiga sanadihii la soo dhaafay.
Wasiirka arimaha dibada ee Sweden Anne Linde ayaa ku tiri hadal kooban ka hor kulanka. Sida uu soo xigtay TT.